Nhau - Pedyo nedhayi infrared
Pedyo nedhaidhi infrared
Pedyo nedhaidhi infrared inoratidza kupinza mwenje munzvimbo yepedyo infrared ye 700-2000 nm. Kubata kwavo kwakanyanya kunowanzo kubva pakubhadharisa dhayi ye organic kana simbi yakaoma.
Zvishandiso zvepedyo infrared absorption zvinosanganisira cyanine madhayi ane yakawedzera polymethine, phthalocyanine dhayi ine simbi yepakati yealuminium kana zinc, naphthalocyanine madhayi, nickel dithiolene zvivakwa zvine mraba-planar geometry, squarylium madhayi, quinone analogues, diimonium makomponi uye avo zvigadzirwa.
Zvishandiso zvinoshandisa aya ehupenyu madhayi anosanganisira ekuchengetedza mamaki, lithography, optical kurekodha midhiya uye efaera mafirita. Iyo laser-inosimudzira maitiro inoda padhuze nemuchina wedhayi kuva nekunyorova kwekutora kwenguva yakareba kupfuura 700 nm, yakanyanya solubility kune akakodzera organic solvents, uye yakanakisa kupisa-kusagadzikana.
In kuitira kuti kuwedzere kushandurwa kwesimba kugona kweiyo organic solar cell, inoshanda padhuze nemuchina wedhayi inodiwa, nekuti mwenje wezuva unosanganisira padyo nemwenje wechiedza.
Uyezve, padhuze nemadhaya emuchadenga anotarisirwa kunge ari biomaterials yekemotherapy uye yekufungidzira yakadzika-matishu mu-vivo nekushandisa luminescent phenomena mune iri padyo infrared nharaunda.
Post nguva: Jan-25-2021